ရုရှားတို့ မြန်မာတို့ကို ထောက်ပံ့မယ်ဆိုသော PANTSIR-S1 လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး စနစ် နှင့် ORLAN-10E ထောက်လှမ်းရေး ဒရုန်းဆိုတာ ဘာလဲ…? – New Of Burmese
ရုရှားတို့ မြန်မာတို့ကို ထောက်ပံ့မယ်ဆိုသော PANTSIR-S1 လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး စနစ် နှင့် ORLAN-10E ထောက်လှမ်းရေး ဒရုန်းဆိုတာ ဘာလဲ…?
လက်ရှိအချိန်တွင် ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည်မြန်မာပြည်သို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံအား Pantsir-S1လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်များနဲ့Orlan-10E မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များထောက်ပံ့သွားမည်ဟုဆိုလိုက်ပါသည်။ထိုရုရှားက မြန်မာကို ရောင်းချပေးမဲ့တဲ့ Orlan-10Eထောက်လှမ်းရေး ဒရုန်းဟာ အရင်ကရုရှားတပ်မတော်မှာသာ အသုံးပြုလျက် ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံး Export ရောင်းချထောက်ပံ့ ပေးတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Orlan-10E ဒရုန်းဟာ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်နဲ့ မောင်းနှင်တဲ့UAV အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ဒရုန်းတစ်စင်း (၁ယူနစ်ကို)ဒေါ်လာ ၈၇,၀၀၀ မှ ဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ ကြားတန်ဘိုးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။Orlan-10E ဒရုန်း အုပ်စုမှာ ဒရုန်း ၃စင်းပါဝင်ပါကပထမတစ်စင်းက တစ်ကီလိုမီတာ သို့မဟုတ် ၁.၅ကီလိုမီတာ အမြင့်မှ ထောက်လှမ်းရေး လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဒုတိယ တစ်စင်းက အီလက်ထရွန်နစ်စစ်ဆင်ရေး Electronic Warfare လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယ ဒရုန်းတစ်စင်းကတော့ ရေဒီယို အချက်ပြ အသံလွှင့် Transponderအဖြစ်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေး သတင်း အချက်အလက်တွေကို မြေပြင် ထိန်းချုပ်မှု စခန်းကို ပို့လွှင့် ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒရုန်းဟာ မြေပြင်ကို ပြန်လည် ဆင်းသက်လာရာမှာလေထီးကို အသုံးပြု ဆင်းသက်ပြီး၊ ဒရုန်းရဲ့ ဝမ်းဗိုက်အောက်မှာ လေအိတ်တစ်လုံးကို သုံးပြီး ဆင်းသက်ရပါတယ်။Orlan-10 ဒရုန်းကို အမေရိကန်၊ ဂျပန် ၊ ဂျာမနီ ၊တရုတ်နဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ထားတယ်လို့လည်း သိရှိရပါတယ်။ရုပ်သံဖိုင်Pantsir-S1 အနေနဲ့ကတော့မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာ၂၁.၆.၂၀၁၇နေ့မှာ ရုရှားနိုင်ငံ Tulaမြို့မှာရှိတဲJSC KBP(Instrument Design Bureau)မှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုသွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။
KBPစက်ရုံဟာ ဝေဟင်မှ မြေပြင်ပစ် မစ်ဇိုင်းများ၊မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ်မစ်ဇိုင်းများနဲ့ မြေပြင်ပစ်မစ်ဇိုင်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ KBPစက်ရုံဟာ ရုရှားတို့ရဲ့ နာမည်ကြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစံနစ် Pantsir-S1ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။Pantsir-S1ကို NATOတပ်ဖွဲ့ကSA-22 Greyhound လိုအမည်ပေးထားပါတယ်။ရုရှားမှာ ၂၀၁၂ကတပ်တော်ဝင်ခဲ့ပြီးUS$ 13.15 million မှUS$14.67millionတန်ဖိုးရှိပါတယ်။(Update: ယူအေအီး နှင့် ဆားဗီးယားတို့ကိုဒေါ်လာ ၁၅သန်းနှင့် ရောင်းချပေးခဲ့သည်။)Pantsir – S1ယူနစ်တစ်ခုမှာမြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည် (SAM)12ခုနဲ2Dual 30mm အော်တိုစက်အမြောက်၎လက်ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီစံနစ်မှာ တာတို တာလတ်ပစ်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစံနစ်တွေပေါင်းစပ်ထားပြီး၊နောက်ဆုံးပေါ်Air Defence Technology နဲ့ခေတ်မီရေဒါတွေ ပါဝင်ပါတယ်Pantsir S1ဟာ တိုက်လေယာဉ်၊ဟယ်လီကော်ပတာ၊ခရုဇ်ဒုံးကျည်တွေနဲ့မောင်းသူမဲ့ ဒရုန်း UAVတွေကိုကောင်းစွာ ပစ်ချနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချို့စစ်သတင်း website တွေကတော့Stealthနည်းပညာသုံးတဲ့ F-22,F-35တိုက်လေယာဉ်တွေကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။
(ဒါကတော့ ချင့်ချိန်ပြီးမှ ယုံကြည်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။)
Credit : Than Lwin Ū
လကျရှိအခြိနျတှငျ ရုရှားကာကှယျရေးဝနျကွီးသညျမွနျမာပွညျသို့ ခဈြကွညျရေး ခရီး လာရောကျလညျပတျလကျြရှိပွီး မွနျမာနိုငျငံအား Pantsir-S1လကွေောငျးရနျ ကာကှယျရေးစနဈမြားနဲ့Orlan-10E မောငျးသူမဲ့လယောဉျမြားထောကျပံ့သှားမညျဟုဆိုလိုကျပါသညျ။ထိုရုရှားက မွနျမာကို ရောငျးခပြေးမဲ့တဲ့ Orlan-10Eထောကျလှမျးရေး ဒရုနျးဟာ အရငျကရုရှားတပျမတျောမှာသာ အသုံးပွုလကျြ ရှိပွီးမွနျမာနိုငျငံကို ပထမဆုံး Export ရောငျးခထြောကျပံ့ ပေးတာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Orlan-10E ဒရုနျးဟာ ဓာတျဆီ အငျဂငျြနဲ့ မောငျးနှငျတဲ့UAV အမြိုးအစား ဖွဈပွီး ဒရုနျးတဈစငျး (၁ယူနဈကို)ဒျေါလာ ၈၇,၀၀၀ မှ ဒျေါလာ ၁၂၀,၀၀၀ ကွားတနျဘိုးရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။Orlan-10E ဒရုနျး အုပျစုမှာ ဒရုနျး ၃စငျးပါဝငျပါကပထမတဈစငျးက တဈကီလိုမီတာ သို့မဟုတျ ၁.၅ကီလိုမီတာ အမွငျ့မှ ထောကျလှမျးရေး လုပျငနျးတှကေိုဆောငျရှကျပွီး၊ ဒုတိယ တဈစငျးက အီလကျထရှနျနဈစဈဆငျရေး Electronic Warfare လုပျငနျးတှကေိုလုပျဆောငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ တတိယ ဒရုနျးတဈစငျးကတော့ ရဒေီယို အခကျြပွ အသံလှငျ့ Transponderအဖွဈနဲ့ ထောကျလှမျးရေး သတငျး အခကျြအလကျတှကေို မွပွေငျ ထိနျးခြုပျမှု စခနျးကို ပို့လှငျ့ ပေးမှာဖွဈပါတယျ။
ဒရုနျးဟာ မွပွေငျကို ပွနျလညျ ဆငျးသကျလာရာမှာလထေီးကို အသုံးပွု ဆငျးသကျပွီး၊ ဒရုနျးရဲ့ ဝမျးဗိုကျအောကျမှာ လအေိတျတဈလုံးကို သုံးပွီး ဆငျးသကျရပါတယျ။Orlan-10 ဒရုနျးကို အမရေိကနျ၊ ဂပြနျ ၊ ဂြာမနီ ၊တရုတျနဲ့ နိုငျငံပေါငျးစုံက ပစ်စညျး အစိတျအပိုငျးတှနေဲ့ဖှဲ့စညျး တညျဆောကျ ထားတယျလို့လညျး သိရှိရပါတယျ။ရုပျသံဖိုငျPantsir-S1 အနနေဲ့ကတော့မွနျမာ့တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျဟာ၂၁.၆.၂၀၁၇နမှေ့ာ ရုရှားနိုငျငံ Tulaမွို့မှာရှိတဲJSC KBP(Instrument Design Bureau)မှာစဈလကျနကျပစ်စညျးတှကေိုသှားရောကျလလေ့ာကွညျ့ရှုခဲ့ပါတယျ။
KBPစကျရုံဟာ ဝဟေငျမှ မွပွေငျပဈ မဈဇိုငျးမြား၊မွပွေငျမှ ဝဟေငျပဈမဈဇိုငျးမြားနဲ့ မွပွေငျပဈမဈဇိုငျးအမြိုးမြိုးထုတျလုပျတဲ့စကျရုံကွီးဖွဈပါတယျ။ဒီ KBPစကျရုံဟာ ရုရှားတို့ရဲ့ နာမညျကွီးလကွေောငျးရနျကာကှယျရေးစံနဈ Pantsir-S1ထုတျလုပျတဲ့ စကျရုံလညျးဖွဈပါတယျ။Pantsir-S1ကို NATOတပျဖှဲ့ကSA-22 Greyhound လိုအမညျပေးထားပါတယျ။ရုရှားမှာ ၂၀၁၂ကတပျတျောဝငျခဲ့ပွီးUS$ 13.15 million မှUS$14.67millionတနျဖိုးရှိပါတယျ။(Update: ယူအအေီး နှငျ့ ဆားဗီးယားတို့ကိုဒျေါလာ ၁၅သနျးနှငျ့ ရောငျးခပြေးခဲ့သညျ။)Pantsir – S1ယူနဈတဈခုမှာမွပွေငျမှ ဝဟေငျပဈဒုံးကညျြ (SAM)12ခုနဲ2Dual 30mm အျောတိုစကျအမွောကျ၎လကျပါဝငျပါတယျ။
ဒီစံနဈမှာ တာတို တာလတျပဈလကွေောငျးရနျကာကှယျရေးစံနဈတှပေေါငျးစပျထားပွီး၊နောကျဆုံးပျေါAir Defence Technology နဲ့ခတျေမီရဒေါတှေ ပါဝငျပါတယျPantsir S1ဟာ တိုကျလယောဉျ၊ဟယျလီကျောပတာ၊ခရုဇျဒုံးကညျြတှနေဲ့မောငျးသူမဲ့ ဒရုနျး UAVတှကေိုကောငျးစှာ ပဈခနြိုငျတယျလို့ဆိုပါတယျ။အခြို့စဈသတငျး website တှကေတော့Stealthနညျးပညာသုံးတဲ့ F-22,F-35တိုကျလယောဉျတှကေိုပါ ခွိမျးခွောကျနိုငျစှမျးရှိတယျလို့သုံးသပျထားပါတယျ။
(ဒါကတော့ ခငျြ့ခြိနျပွီးမှ ယုံကွညျနိုငျပါတယျ ခငျဗြ။)
Previous Article ကာကွယ်ဆေးကို မယုံတဲ့ ဂဏန်းကောင်တွေနဲ့ အစိုးရကို ကျေးဇူးတင်ရမှာကို ငရဲကျမှာထက် ကြောက်သူများ
Next Article ကားပါကင်တွင်အိပ်ခဲ့ရသည့် စစ်သည်များကို အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တောင်းပန်…